Akhriso:-Ma RW Rooble ayaa boob ku haya dhul ay leeyihiin Ciidanka Badda Soomaaliya? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Iyadoo Taliyaha Ciidamada badda Sarreeye Guuto Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir uu warbaahinta ku sheegay in mas’uuliyiin sare oo uu ka mid yahay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay doonayaan inay dhistaan dhulka ciidanka badda, ayaa waxaa soo baxaya jawaabo kala duwan oo arrintaasi ay kaga fal celiyeen mas’uuliyiin xilal ka haysa dowladda iyo mas’uuliyiin hore.
Taliyaha Ciidamada Badda ayaa sheegay in Mas’uuliyiinta boobka wadda ay doonayaan in dan shaqsiyadeed loo qaato si looga dhiso dhul lagu nasto, laguna raaxaysto, sida uu hadalka u dhigay, waxaana arrintaasi ay dhalisay hadal hayn weyn.
Dadka sida kulul kaga jaabay arrintaasi waxaa ka mid ah Sarreeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) oo ah Wasiiru Dowlaha Cusub ee Wasaaradda Howlaha Guud Iyo Guryeynta, waxaana uu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid meel ka dhac iyo gaf ah,oo lagula kacay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Bashiir Goobbe ayaa intaa ku daray in hadalka Taliyaha Ciidamada badda uu arga-gax ku noqday iyo filan waay, taasi oo uu sheegay in ay tahay arrin aan laga fiirsan sidoo kalena Ra’iisul wasaaraha uusan wax lug ah ku lahayn, waxaana intaa uu ku daray in aysan jirin wax dhul ah oo boob lagu hayo.
Waxa uu sheegay in ogaanshihiisa dhulkaasi aanu ahayn dhul ciidan. Waxa uu sheegay in dhulkaasi yahay dhul “yar” oo u dhexeeya xeebta iyo safaaradda Turkiga.
Sarreeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) oo ah Wasiiru Dowlaha Cusub ee Wasaaradda Howlaha Guud Iyo Guryeynta, ayaa carrabka ku dhuftay in anshaxa ciidamada aysan ku jirin in sarkaal darajo Ciidan leh uu warbaahinta ja eedeeyo madaxda qaranka.
Sidoo kale shaqsiyaadka ka jawabay hadalka taliyaha Ciidanka badda waxaa ka mid ah Guddoomiyihii hore ee Maxkamada Gobalka Banaadir Muuse Macalim Maxamed, waxaana uu sheegay in hadalka Taliyaha uu sharciga baalmarsan yahay, taasi oo uu u soo xigtay Qodobbo dastuuri ah.
“Soo tii Sarkaalka dowladda laga doonayay in uu si waafaqsan Qod:19 XHC u maro oo hadii lagu qancana loo marayay wadadi dheereyd goormaa la soo gaabiyay yaab iyo dhabana heys.Tan waaba ka duwantahaye , Saraakiisha Ciidankow u tura Xirfadda Ciidan ee dusha idiin suran” ayuu yiri Guddoomiyihii hore ee Maxkamada Gobalka Banaadir Muuse Macalim Maxamed.
Eedeynta Rooble ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay ahayd mid si weyn la iskula dhex-marayay,taasi oo hadal hayn dhalisay, waxaana sidoo kale isi-soo tarayay shaqsiyaadka arrintaasi ka bari yeelayay in Rooble uu ku kacay boob.
La-taliyeyaasha Putin iyo Biden oo wada hadal khadka taleefanka ah yeeshay